Nepal Auto | हामी मार्केट लिडर
हामी मार्केट लिडर 31 Bhadra, 2075
– रविन्द्र उपाध्याय
हेड, मार्केटिङ एन्ड ब्रान्डिङ/डिलर नेटवर्क
नेपाल ल्युब आयल लिमिटेड
हाल नेपालमा लुब्रिकेन्टको बजार अवस्था कस्तो छ ?
हाल नेपाली लुब्रिकेन्ट बजार प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा छ । हाल करिब १ सय भन्दा बढी ब्रान्ड नेपाली बजारमा छन् । यद्यपि प्रतिस्पर्धाको बाबजुद हामीले ९ प्रतिशत बजार ओगटिरहेका छौ । हामी मार्केट लिडर बनेका छौं र यो वर्ष नम्बर वान पोजिसन कायम गर्न सफल भएका छौ ।
कुन कुन सेगमेन्टका लुब्रिकेन्ट उपलब्ध गराइरहनु भएको छ ?
हामी ६ वटा सेगमेन्टमा उत्पादन उपलब्ध गराइरहेका छौ । हामीले टु ह्विलर, प्यासेन्जर कार सेगमेन्ट, कमर्सियल भेइकल, फेम, ग्रिज एन्ड अदर्स र इन्डष्ट्रियल प्रोडक्टका लागि हाम्रा उत्पादन उपलब्ध गराइरहेका छौ । ६ वटै सेगमेन्टमा हाम्रो पहुँच राम्रो छ । उस्तै अवस्था छ । यद्यपि सेगमेन्ट अनुसार हेर्दा फेममा हामी मार्केट लिडर छौ । टु ह्विलरमा हामी तेस्रो नम्बरमा छौ । प्यासेन्जर कार सेगमेन्टमा हामी पाँचौ नम्बरमा छौ । समग्र सबै सेगमेन्टमा हेर्दा हामी पहिलो नम्बरमा छौ ।
गल्फ लुब्रिकेन्ट नेपालमै उत्पादन हुन्छ । यसको वारेमा केही बताइदिनुस् न
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा ६२ देशमा गल्फ लुब्रिकेन्टको म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट छ, जसलाई हामी ब्लेन्डिङ हब पनि भन्छौ । ती मध्ये नेपाल पनि एक हो । यो हाम्रो लागि गौरवको विषय पनि हो । हामीले यही नै लुब्रिकेन्ट उत्पादन गर्छौ । यद्यपि कतिपय प्राविधिक रुपमा सम्भव नहुने उत्पादन वाहिरबाट पनि ल्याउछौ । जस्तो कि हामीले अल्ट्रासिन्थ एक्स लगायतका लुब्रिकेन्ट वाहिरबाट ल्याउछौ । हामीले यही उत्पादन गर्ने इन्जिन आयलको गुणस्तर पनि गल्फ आयल इन्टरनेसनलले समय समयमा परीक्षण गर्छ । हामीले उत्पादन गरेका सामग्रीको नमूना ३ वर्ष सम्म सुरक्षित राख्नु पर्छ । त्यही नमूना नै गल्फ आयल इन्टरनेसनलले परीक्षण गर्छ । गल्फ आयल इन्डियाले पनि यो परीक्षण गर्न सक्छ । त्यसैले हामीले नेपालमा बनाए पनि, भारतबाट ल्याए पनि, दुबईबाट ल्याए पनि हाम्रो गुणस्तरमा कुनै समस्या हुँदैन ।
अटो शोमा मानिसहरु बढी गाडी, मोटरसाइकलतिर झुम्मिन्छन् । यो अवस्थामा लुब्रिकेन्टबाट प्रतिनिधित्व गरिरहदा कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ?
हामीले अरु भन्दा केही फरक छौ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेका छौ । हामी स्थानीय उत्पादक मात्र होइनौ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लुब्रिकेन्टलाई प्रतिनिधित्व गर्छौ । हामीले स्टलमा राखेको विश्वको नक्साले पनि यसलाई देखाइरहेको छ । विश्वका ६२ देशमा यसको ब्लेन्डिङ हब्स छ भन्ने कुरा गल्फको लोगोले देखाइरहेको छ । यसले अन्य ब्रान्ड भन्दा हामीलाई फरक देखाएको छ ।
अर्को कुरा हामीले फेसबुक क्याम्पेन पनि चलाइरहेका छौ । हामीले क्लिक, पिक एन्ड विन भन्ने एउटा ‘थिम’ राखेका छौ । जति पनि अवलोकनकर्ता आउनु हुन्छ, उहाँहरुले आफ्नो फोटो हाम्रो स्टलमा क्लिक गर्नुहुन्छ । उहाँहरुले त्यहाँ राखेका सामग्री मध्ये एउटा लक्की ड्रमार्फत तुरुन्तै पाउनु हुन्छ । इभेन्टको अन्त्यमा सर्बाधिक धेरै लाइक्स पाउने र सेयर हुने फोटोलाई गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिने छ ।
गल्फले स्किमको नाममा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भित्र्यायो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लाई भन्ने ? यसैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । कतिपय ब्रान्डहरु गल्फले कहिले स्किम ल्याउछ भनेर कुरेर वस्ने गरेको पनि पाइन्छ । हामीले अरु भन्दा फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिरहेका छौ । हामीले स्किममा पनि गुणस्तरीयता कामय गरेका छौ । जथाभावी गरेका छैनौ ।
हामीले यो वर्ष अनलाइन मार्केटिङलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौ । डिलर नेटवर्कलाई विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौ । हामीसँग हाल २८ वटा डिष्ट्रिब्युटर छन् । हामीले पहिले पनि नयाँ ब्रान्ड उपलब्ध गराउदै आएका थियौ । आगामी दिनमा पनि यो कार्य जारी रहने छ ।